Sales & Services - Shanghai kacay Co., Ltd
Dhismaha & taaban karo
SKA & Kaydinta
Sales & Adeegyada
sara kacay Care
Dhacdooyinka sara kacay
400 Adeegga Macaamiisha xarumaha
Our 400 xarumaha adeegga macaamiisha kala qaybsan yihiin xarumaha isgaarsiinta macluumaadka, xarumaha si loo hagaajiyo qancinta macaamiisha, xarumaha falanqaynta dhaqanka macaamiisha, iyo xarumaha marketing wax soo saarka, kuwaas oo ay kuu siiyaan adeegga xirfadaysan oo ay ku jiraan macluumaad xarunta adeega, wada tashi qiimaha, taageero farsamo, wax soo saarka cabashooyinka, dayactirka iyo weydiimaha dayactir, iyo taageero iibka.
Inta lagu jiro maalinta waayo-aragnimo user waxaan qaataan waqti ay si buuxda u soo bandhigo wax soo saarka cusub oo wax ku ool ah u fuliyaan hawlaha aragnimo macaamiisha, kaa caawiyo in aad si wanaagsan u fahmaan XCMG, oo ku siisaa adiga xal dhismaha ee gaarka loo leeyahay kartoo.
Barnaamijka Golden Tababarka Hawl
Waxaan rabnaa in aan ka qayb qaataan tababarka xirfadlayaasha warshadaha u fiican, si aan u xiiso dhismaha ah saldhig tababar shaqaale, wakaalad Qaranka qaadayso Skills iyo tartanka Tartanka Design la taaban karo, oo si firfircoon u kaashanaya shirkadaha dhismaha.
Private kartoo Dhismaha Solutions
Waxaan leenahay khayraadka software iyo hardware iyo sidoo kale ka sano oo khibrad ah dhismaha loo baahan yahay si ay kuu siiyaan xal hufan oo heer sare ah kartoo dhismaha. Waxaan si farxad ay dhegaysan doonaan mid ka mid ah design aad wax soo saarka, wax soo saarka, ama fikrado adeega inta lagu guda jiro nidaamka wada tashiga.
INTA-Hantida qalaad ADEEGGA
Dalabka dhismaha kala duwan wax walba waa, oo aan u tudhin dadaal lahayn in aad ka caawiyay inay doortaan qalabka ku habboon oo ay ogaadaan qiimaha isitcmaalo qalabka aad iibsato.
One-joojin Financial Services
ku salaysan faham qoto dheer ee wax soo saarka mishiino injineernimada iyo baahida macaamiisha, waxaan la hay'adaha maaliyadeed ee waaweyn shaqeeyaan si ay u siiyaan ganacsigaaga la xal maalgelinta ugu fiican.
In si ay u daboolaan baahida aad kasta, waxaanu bixinaa adeega gaarsiinta gaadiidka xirfad iyo adeeg tababar loogu rakibo hore la dhul kasta oo ka mid ah mashiinada ah.
Ka dib-Sales Service
365 × 24 Service wareega-Sano
Caalamka, waxaan leenahay ka badan 5000 injineerada adeegga iyo 1500 gaadiidka heegan ah. Waxaa naga go'an in sanadka oo dhan 24-ka saac xitaa inta lagu jiro fasaxyada, oo waafaqsan siyaasadda ee marwalbana siinaya our "jawaab 15 daqiiqo gudahood iyo dhamaystirka shaqada 24 saac gudahood."
Adeegga Butler Smart
Waxaan ku adkeeyey a GPS Xarunta Adeega Global kaamil ah, oo aan ku siin karaan nidaamka khamriga smart firfircoon iyada oo Internet ah Waxyaabaha madal.
Qaybo ka firaaqada marka aad u baahato
Waxaan leenahay kun oo dayactir xarumaha guud ahaan shan qaaradood stock in ku dhawaad 1 bilyan oo takhasus dayactir. Waxaan balan qaadayaa in dayactir waxaa loo dhiibi doonaa 72 saacadood gudahood.
Ka dib markii suuqa Service Walwalka-free
Waxaan nahay ballanqaadeen in ay bixiyaan adeegyada suuqa ka dib, oo ay ku jirto kirada, qiimaynta gaari gacan labaad, ganacsiga-tago, overhauls, iyo dib u warshadaynta. Waxaan mar walba ku eekaan our mas'uuliyadda iyo shaqada ee la xalinaayo walaac aad sida ugu fiican ee aan awoodno.
Club Customer VIP
Waxaan leenahay a "macaamiisha-khabiir-warshad-dhismaha" afar hab iskaashi iyo is-dhaafsiga madal, nidaamka maamul wanaagga iyo socodka shaqada.
24 saac khadka: 0086-13916689101
Dhibic LINE A US!
© 2015 Shanghai kacay Electronic & Farsamada Qalabka Co., Ltd. All Right Reserved